एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन समापनका दिन पार्टीको निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बा निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम घोषणा गर्दै थिए । त्यसक्रममा बागमती प्रदेश क्लस्टरअन्तर्गत निर्विरोध निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य पार्वती रावलको नाम लिनेबित्तिकै हलमा परर ताली बज्यो ।
नबजोस् पनि किन, चितवनमा महाधिवेशन हुँदै गर्दा सबैजसो प्रतिनिधिका लागि चिरपरिचित र मुखैमा झुण्डिएको नाम बनिसकेको थियो, पार्वती रावल । यस्तो ताली अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सचिव योगेश भट्टराईलगायत सीमित नेताको नाम लिँदा मात्र बजेको थियो ।
देशका विभिन्न कुनाकाप्चाबाट आएका प्रतिनिधिलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दा, केही असहज हुँदा सबैभन्दा पहिला पुग्ने उनै हुन्थिन् । खाना खान लाइन लागेका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्न पनि उनै पुग्थिन् । खाना खानुभयो कि भएन ? बास बस्न कुनै समस्या भएको छ कि ? भनेर हरेक प्रतिनिधिलाई सोध्थिन् ।
महाधिवेशन भइरहेको जिल्लाको पार्टी अध्यक्षका हैसियतले यो उनको जिम्मेवारी पनि थियो । उनी आफ्नो जिम्मेवारीमा यसरी खरो रूपमा उत्रिइन् कि उनको 'पार्ट'मा कसैले गुनासो गर्ने ठाउँ नै पाएनन् ।
रावल अहिले एमालेकी एक मात्र महिला जिल्ला अध्यक्ष हुन् । यसअघि स्याङ्जामा पद्मा अर्याल र मकवानपुरमा मुनु सिग्देलले एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
समग्रमा भन्दा उनी देशभरीमै एमालेको तेस्रो महिला अध्यक्ष हुन् । पद्मा हाल पार्टी सचिव बनिसकेकी छन् भने सिग्देल एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेकी छन् ।
कठिन घडीमा जिम्मेवारी, अब्बल प्रस्तुति
नेकपाकालमा चितवनस्थित जिल्ला पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको बोलवाला थियो ।
पार्टी एकताअघि पनि एमालेको चितवन जिल्ला कमिटी माधव नेपाल पक्षकै कब्जामा थियो । जिल्ला कमिटीमा ९६ जना निर्वाचित हुँदा ९ जना मात्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका थिए । त्यसमा सबैभन्दा सिनियर थिइन्, तत्कालीन सचिव पार्वती रावल ।
पार्टी एकता हुँदा एमाले र माओवादी दुवैका जिल्ला कमिटी मर्ज भए । १५५ सदस्यीय कमिटी बन्यो । नेकपाभित्र अन्तरसंघर्ष चर्किएका बेला प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एकजुट हुने नै भए । ओली पक्ष ९ का ९, अर्कातर्फ १४६ जना ।
पूर्व माओवादी खेमाबाट रामबहादुर थापा बादलको साथ ओलीलाई मिले पनि चितवनमा त्यसको खासै प्रभाव थिएन । त्यतिबेला पूर्व माओवादी खेमाका सबैजसो नेता प्रचण्ड समूहमै थिए ।
अन्तरसंघर्ष चर्किँदै जाँदा केन्द्रमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट कारबाही गरे । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पार्टीको समानान्तर कमिटी बन्ने अवस्था आयो ।
त्यसपछि ओलीले सर्कुलर गरे– ‘हाम्रो समूहमा सिनियर मोस्ट जो छ, उसैले नेतृत्व लिने ।’
नेकपा कालमा जिल्ला कमिटीअन्तर्गत कार्यालय सदस्य रहेकी रावल समग्रमा चौथो वरीयतामा थिइन् । अध्यक्ष, सचिव र तेस्रो वरीयतामा रहेका नेता पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहमा लागेकाले ओलीपक्षीय कमिटीको नेतृत्व उनकै काँधमा आइपुग्यो ।
समय बित्दै जाँदा घटनाक्रम यसरी विकसित भयो कि सर्वोच्चको एक फैसलाले एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । नेकपाको दर्ता नै भंग भयो ।
उनी अब एमालेको चितवन जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बनिसकेकी थिइन् ।
चितवनमा रावलको समन्वयकारी छवि छ । कसैलाई नराम्रो भन्दिनन् । बिझाउने कुरा गर्दिनन् । अरू दलका नेताले समेत उनलाई राम्रो मान्छन् । यही खुबी यहाँ उनको काम आयो ।
सबैसँग मीठो बोल्ने, उनीहरूका कुरा सुनिदिने, कुनै गुनासो भए नेतृत्वसम्म पुर्‍याएर समाधानका लागि पहल गरिदिने गर्न थालिन् । परिणाम यस्तो देखियो– स्पष्ट अल्पमतमा रहेको संस्थापन पक्ष बहुमतभन्दा माथि पुगिसकेको थियो ।
तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल पनि उनकै नेतृत्व मातहत आए । संस्थापन पक्षमा खुलेपछि पोखरेलले जिल्ला कमिटी बैठकबाटै औपचारिक रूपमा रावललाई जिल्ला अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरे ।
नेकपाकालीन अन्तरसंघर्ष एमालेमा पनि जारी रह्यो । माधव नेपालले समानान्तर अभ्यास गर्न थाले । एकताअघिको जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्ष रहेका तेजेन्द्र खड्का (जो नेकपाकालमा तेस्रो वरीयतामा थिए) समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष बने ।
समानान्तर कमिटी वा अर्को पक्ष भनेर उनले कहिल्यै फरक व्यवहार गरिनन् । परिणाम, खड्का पनि अहिले एमालेमै छन् । उनी माधव नेपालसँग एकीकृत समाजवादीमा गएनन् ।
अहिले तत्कालीन जिल्ला कमिटीका १४/१५ जना मात्र एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । समानान्तर कमिटीका अध्यक्ष, सचिवसहित चिनिएका सबैजसो नेतालाई पार्टी काममा फर्काउन उनी सफल भैसकेकी छन् ।
पार्टी विभाजनको पूर्वसन्ध्यामा केन्द्रमा १० बुँदे सहमति भयो । जसमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने कुरा पनि उल्लेख थियो ।
त्यसपछि कृष्णभक्त पोखरेलले आफू पुनः अध्यक्ष हुने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तर, ओलीले उनको कुरै सुनेनन्, ‘पार्वती नै अध्यक्ष हो, उनैले जिल्ला अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छिन्’ भनिदिए । कुरा त्यहीँ सकियो ।
चितवनको त्यो सभा, अनि दरबारमार्गको सम्बोधन
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई यति धेरै विश्वास गर्नु र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुका पछाडि चितवनमा आयोजित एक सभाको मत्त्वपूर्ण योगदान छ ।
नेकपाको अन्तरद्वन्द्व समानान्तर अभ्यासको अवस्थामा पुगेका बेला दुवै पक्ष एकअर्काविरुद्ध शक्ति प्रदर्शनको होडमा थिए ।
देशका मुख्य शहरहरूमा दुवै पक्षले शक्ति प्रदर्शन गर्ने हिसाबले सभा गरिरहेका थिए ।
यही क्रममा ओलीलाई प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा गएर शक्ति प्रदर्शन गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसै पनि चितवनको जिल्ला कमिटीमा दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्य प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा थिए ।
चितवनमा सभा आयोजना भयो । उक्त सभामा उपस्थिति यस्तो रह्यो कि जुन ओली पक्षका शायदै नेताले कल्पना गरेका थिए । त्यो विशाल उपस्थितिको पृष्ठभूमिमा उनै रावल थिइन् ।
चितवनबाट निकै खुशी भएर फर्किएका ओलीले दरबारमार्गमा आयोजित विशाल सभामा त्यसको पुरस्कार दिए । दरबार मार्गको सभालाई सम्बोधन गर्ने रावल एक मात्र महिला नेतृ थिइन् ।
ठूल्ठूला नेताले समेत बोल्न समय नपुगेको सभामा उनले मौका पाइन्, जसको उनले भरपुर सदुपयोग पनि गरिन् । नेतृत्वको नजरमा उनको राजनीतिक हाइट बढेरै गयो ।
अनि भयो चितवनमा महाधिवेशन
पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई पहिलेदेखि नै लागेको रहेछ । तर, महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने भनेर घोषणा नै भइसकेको थियो ।
यसबीचमा ललितपुरको गोदावरीमा असोज १५ देखि १७ सम्म प्रथम विधान महाधिवेशन भयो । विधान महाधिवेशन सकिएको २ दिनपछि उनी अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगिन् ।
उक्त भेटमा ओलीले उनको मनकै कुरो सोधे– ‘चितवनमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ र ?’
‘चितवनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पहिले नै लागेको थियो । विधान महाधिवेशन सकिएपछि सम्भवतः १९ गते हुनुपर्छ, म बालकोट पुगेको थिएँ । अध्यक्ष ओलीले चितवनमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ र भनेर सोध्नुभयो,’ ओलीसँगको त्यो भेटको प्रसंग उल्लेख गर्दै रावलले भनिन्, ‘मैले सकिन्छ भनें । उद्घाटन सभा र आवासका लागि कुनै समस्या हुँदैन, बन्दसत्रका लागि अलिकति म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो ।’
त्यसक्रममा टेन्ट टाँगेर बन्दसत्रका लागि हलको व्यवस्थापन गर्न सकिने विकल्प पनि अध्यक्ष ओलीसामु पेश भयो । अध्यक्ष ओलीले त्यो कुरा सहर्ष स्वीकारे ।
‘उहाँले टेन्टमा पनि गर्न सकिन्छ, विधान महाधिवेशन भइसकेकाले यसपालि हाम्रो बन्दसत्र लामो हुँदैन भन्नुभयो,’ ओलीसँगको संवाद स्मरण गर्दै रावलले भनिन् ।
त्यो प्रसंग त्यसै सकियो । ३ वर्षदेखि ठप्प पार्टी गतिविधिलाई सुचारु बनाउनु थियो । वडा, पालिकादेखि जिल्लासम्मको अधिवेशन गर्नु थियो ।
जिल्ला अध्यक्षको हैसियतले यो सबै जिम्मेवारी उनको हुने नै भयो ।
अबचाहिँ चितवनमा महाधिवेशन हुनसक्छ है भन्ने उनलाई लाग्न थालेको थियो । तर, पार्टीले आधिकारिक निर्णय नलिँदासम्म तयारी थालिहाल्ने अवस्था थिएन ।
‘चितवन देशको मध्य भागमा छ । ७/८ घण्टामा यहाँबाट सुदूरपूर्व र सुुदूरपश्चिम दुवैतिर पुगिन्छ । भौगोलिक सुगमता, पूर्वाधार सबै हिसाबले चितवन उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क थियौंं, तर पार्टीले निर्णय नगर्दासम्म औपचारिक तयारी थाल्ने अवस्था थिएन,’ उनले भनिन् ।
कात्तिक ४ गते रावल चितवनमा पार्टीकै बैठकमा थिइन् । त्यही बीचमा तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलको फोन आयो । पोखरेलले चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको कुरा सुनाए ।
‘बैठक बसिराखेका थियौं । पार्टीको स्थायी कमिटीले १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा गर्ने भनेर निर्णय गरेको सूचना महासचिव ईश्वर कमरेडले फोनमार्फत दिनुभयो । त्यसपछि ५ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर चितवनमा महाधिवेशन हुन लागेको जानकारी गरायौं र पार्टी नेतृत्वलाई धन्यवाद पनि दियौं’, रावलले भनिन् ।
उनी चितवनमा महाधिवेशन ल्याउन चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा बादल, देवी ज्ञवालीलगायतको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछिन् ।
महाधिवेशन सञ्चालनका लागि मूल आयोजक कमिटी बन्यो, जसमा उनी एक मात्र महिला सदस्य थिइन् ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दैगर्दा तयारीका लागि जम्मा १ महिना ४ दिन मात्र बाँकी थियो । पार्टीको स्थानीय कमिटीका अधिवेशनहरू बाँकी नै थिए ।
दुवै काम एकसाथ गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपर्‍यो ।
‘चितवनमै पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ भनेपछि जिल्लाभित्र पार्टीका विभिन्न कमिटीलाई अझै सशक्त र क्रियाशील बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । हामीले ७ वटै स्थानीय तह र सबै वडा कमिटीमा निर्विरोध नेतृत्व चयन गर्‍यौं । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पनि निर्वाचनमा नजाऔं भनेर सर्वसम्मत रूपमा नै २८ जना प्रतिनिधि चुन्यौं । ३ वर्षदेखि ठप्प रहेको पार्टी काम एक महिनामा नै सम्पन्न भयो,’ उनले गर्वसाथ सुनाइन् ।
जिल्ला अधिवेशन महाधिवेशनभन्दा पछि मात्र गर्ने तय भएकाले पार्टीका अन्य काम सम्पन्न भए । तर, उनको मुख्य र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी बाँकी नै थियो ।
‘अहिले ७७ वटै जिल्लामा म पार्टीको एकमात्र महिला अध्यक्ष हो । जिम्मेवारी आउँदा महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने देखाउनका लागि पनि महाधिवेशनलाई कमजोरीरहित बनाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ थिएँ,’ महाधिवेशन तयारीका दिन सम्झँदै उनले भनिन्, ‘हरेक दिनजसो बैठक बसियो । दिनभरी गरेका कामको समीक्षा बेलुका जिल्लाका मुख्य नेताहरू बसेर गर्थ्यौं ।’
महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह नारायणी नदी किनारमा गर्ने तय भएको थियो, तर नारायणी किनार बनीबनाउ मञ्च होइन । त्यसलाई सभाका लागि योग्य बनाउन धेरै काम गर्नुपर्ने थियो ।
महाधिवेशन मूल आयोजक कमिटी तथा मञ्च व्यवस्थापन कमिटी लगायत पनि तयारीका लागि चितवनमा क्रियाशील थिए । चितवनका अन्य नेता समेत खटेकै थिए ।
९ दिन लगाएर नारायणी किनारलाई उद्घाटन समारोहका लागि तयार पारियो ।
‘मंसिर १ गते बिहानबाट नारायणी किनारमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने, मिलाउने, सम्याउने काम शुरू भयो । ९ गते बेलुकासम्ममा हामीले त्यहाँ सबै काम सम्पन्न गरिसकेका थियौं । यसमा मञ्च व्यवस्थापन कमिटी, केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठ र स्वयं सेवक साथीहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘सौराहामा बन्दसत्र गर्ने ठाउँमा पनि पानी जमेको थियो । त्यसलाई सम्याएर टेन्ट राख्ने ठाउँ बनाइयो ।’
महाधिवेशनमा अभूतपूर्व सहभागिता भयो । नारायणी किनारले सहभागीलाई थेग्न सकेन । कतिले नारायणी पुलबाटै सभा हेरे । कतिपय मञ्च समेत नदेखी फर्किए । यसमा उनको व्यक्तिगत दोष केही थिएन, उपस्थिति नै त्यति विशाल थियो त के गर्नु !
उद्घाटन समारोहमा पार्टीका तर्फबाट मुख्यरूपमा अध्यक्ष ओलीले मात्र सम्बोधन गरे । त्यसअघि शुरूमा नेता रामबहादुर थापा बादलले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।
अन्त्यमा उनले धन्यवाद मन्तव्य राख्ने मौका पाइन् । अध्यक्ष ओलीलगत्तै बोलेकी उनले भनिन्– ‘जिम्मेवारी आए गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण आजको नारायणी किनार हो ।’
नारायणी किनारलाई कस्तोबाट कस्तो अवस्थामा पुर्‍याइयो र यति विशाल सभा सम्भव बनाइयो भन्ने उनको आशय थियो ।
कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन चितवनमा गर्ने तयारी २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले 'कु' गरेपछि टरेको इतिहास सम्झिँदै उनले ६० वर्षपछि चितवनले त्यो गौरव प्राप्त गरेको बताइन् ।
उनले चितवनमा महाधिवेशन आयोजना भएकोमा खुशी व्यक्त गरिन्, अनि सभालाई सफल बनाउन भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद दिइन् ।
झोलाभित्रको त्यो कोसेली
नारायणी किनारको सभा सकिएपछि एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बन्दसत्रका लागि सौराहातर्फ लागे । सौराहा पुगेका प्रतिनिधिलाई पार्टीका तर्फबाट एक–एकवटा झोला पनि बाँडिएको थियो ।
झोलाभित्र एमालेको चितवन जिल्ला कमिटीको तर्फबाट एउटा मायाको चिनो राखिएको थियो, जसमा अध्यक्षको हैसियतले उनै रावलले हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।
चितवन जिल्लाको नक्सा आकारभित्र एमाले महाधिवेशनको लोगो राखेर ‘स्मृति चिह्न’ तयार पारिएको थियो । त्यसको तल जिल्ला कमिटी अध्यक्ष रावलको हस्ताक्षर थियो ।
‘चितवनको नक्सा र महाधिवेशनको लोगोअंकित स्मृति चिह्न पाएपछि धेरैले ‘एप्रिसिएट’ गर्नुभयो । त्यसो त म खानाको हरेक लाइनमा पुगेको हुन्थें, सबै होटलमा पुगेर के कसो छ भनेर सोध्थें । यसरी दौडिरहेको देख्दा एउटा महिलाले पनि यो सब गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुभयो भनेर धेरैले भन्नुभयो,’ उनले भनिन् ।
‘ओली खुशी भएर फर्किए, विष्णु पौडेलले प्रशंसा गरे’
महाधिवेशन समापनको भोलिपल्ट बुधवार भरतपुर विमानस्थलबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बिदाइ गर्दैगर्दा उनले आफूलाई प्राप्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि धन्यवाद दिइन् । ओलीले पनि खुशी व्यक्त गरे ।
‘अध्यक्ष कमरेड चितवनबाट फर्किँदै गर्दा मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएँ । व्यक्तिगतरूपमा क्षमता प्रदर्शन गर्ने मौका दिनुभयो, धेरै कुरा सिक्न पाएँ भनें,’ रावलले लोकान्तरसँग भनिन् ।
रावल पार्टी नेतृत्व, जिल्लाका आफूभन्दा सिनियर नेताहरू, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, अन्य पार्टी सबैप्रति अनुग्रहित छिन् । सबैको सहयोग र सद्भावले यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको उनको बुझाइ छ ।
चितवनबाट फर्किएपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग फोनमा उनको कुराकानी भएको रहेछ । ‘उहाँले तपाईंको क्षमता र म्यानेजरियल पार्टबाट एकदमै प्रभावित भएँ भन्नुभयो,’ रावलले खुशीसाथ सुनाइन् ।
उनी अब छिटोभन्दा छिटो चितवनको जिल्ला अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहन्छिन् । उनलाई केन्द्रीय राजनीतिमा अगाडि बढ्नु छ । केन्द्रीय सदस्य बनिसकेपछि त्यसका लागि बाटो पनि खुलेको छ ।
‘यताको हिसाबकिताब सबै सकेर, बरबुझारथ गरेर केही दिनमा काठमाडौं आउँछु,’ फोनमा भएको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘व्यस्तताले छोराहरूलाई नभेटेको पनि धेरै भयो । न्यास्रो मानिसकेका होलान् ।’
उनका छोराहरू अध्ययनको शिलशिलामा काठमाडौंमा छन् । जेठो छोरा कक्षा ११ मा अध्ययनरत छन् भने कान्छो छोरा भर्खरै स्कूल जान थालेका छन् ।
'माननीय आमा' : नाबालक छोरोले रुँदै पछ्याउँछ, तै पनि खटिएकै छिन् पार्वती
काठमाडौंमा उनको अर्को जिम्मेवारी पनि छ– राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिका रूपमा ।
‘पार्टीको महाधिवेशनका कारण केही समययता समितिलाई समय दिनै पाएको छैन । यताको काम सकेर उता खट्नुपर्ने छ,’ यति भन्दै उनले कुराकानीलाई बिट मारिन् ।